Uru ịzụrụ ndị debanyere aha YouTube n'ezie n'aka anyị
Nweta ezigbo ndị debanyere aha na mgbasa ozi YouTube
Anyị ga -adabere na ọdịnaya vidiyo gị iji chọpụta ndị nwere ike lekwasịrị anya tupu ịmalite mkpọsa mgbasa ozi.
Ọmụmaatụ: Isiokwu vidiyo gị bụ egwu. Mgbe ahụ, anyị ga -ezubere ndị na -ege egwu ụwa niile n'anya.
Ndị mmadụ na -ekiri vidiyo gị site na mgbasa ozi anyị na -etinye na vidiyo egwu wee denye aha na ọwa ma ọ bụrụ na ọ dọta ha. Yabụ, ọ bụ ka ọwa gị si enweta ezigbo ndị debanyere aha.
Kedu nkwalite ahụ dị ka ya?
Mee ka ihe okike dị mma maka vidiyo n'ọdịnihu
Ka ị ga-enweta ndị debanyere aha n'ezie na ndị ọzọ, ị ga-enwetakwu echiche na njikọ aka maka vidiyo ọzọ. N'ezie, ezigbo ndị debanyere aha ga-enye gị ntọala siri ike iji gbasaa ndị na-ege ntị n'ụzọ dị mfe. Ọ ga - abụ ezigbo ego ogologo oge maka ihe ọhụụ ọhụụ YouTubers.
Ndị debanyere aha ga-arapara na ọwa gị maka ndụ
A debanyere aha anyị dị ka ezigbo & kwụsie ike. Nkwụghachi ugboro abụọ ma ọ bụrụ na YouTube na-ewepu ndị debanyere aha ma ọ bụrụ na ikpo okwu hụrụ na ha bụ akaụntụ adịgboroja.
Pịgharịa vidio gị na mmetụta "ịrịa"
N'oge mkpọsa ahụ, vidio ndị a kpọsara ga-enwe ihe ngosi 100,000 ego maka ndị debanyere aha 1000. N'ihi uru ahụ, ọ nwere ike itinye vidiyo gị na mmetụta nke nje.
Mgbasa ozi mgbasa ozi vidiyo a na-elekwasị anya ndị na-ege ntị dabere na isiokwu (ọ bụghị isiokwu). Tụlee ọrụ "Nlele YouTube" ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite vidiyo gị nye ndị na -ege ntị dabere na isi okwu na mba akọwapụtara.
Mgbe ị natasịrị iwu gị, anyị ga -adabere na ọdịnaya vidiyo gị iji chọpụta ndị nwere ike lekwasịrị anya wee malite mkpọsa mgbasa ozi.
Ọmụmaatụ: Ọ bụrụ na isiokwu vidiyo gị bụ egwu, anyị ga -elekwasị ndị na -ege egwu ụwa niile n'anya. Ndị mmadụ na -ekiri vidiyo gị site na mgbasa ozi anyị na -etinye na vidiyo egwu wee denye aha na ọwa ma ọ bụrụ na ọ dọta ha. Yabụ, ọ bụ ka ọwa gị si enweta ezigbo ndị debanyere aha. Ọzọkwa, ị ga -enwetakwa nlele, mmasị na nkwupụta mgbe anyị na -aga n'ihu na mkpọsa ahụ.
Kedu ihe kpatara m ga - eji zụta ndị debanyere aha YouTube?
Anyị ga -enyocha ndị ga -ege ntị maka vidiyo gị ozugbo anyị nwetara iwu gị. Mgbe awa 48 mbụ, ị nwere ike lelee uto sitere na mgbasa ozi gị na nchịkọta YouTube. Oge nnyefe ngwa ngwa ma ọ bụ nwayọ ga -adabere na arụmọrụ vidiyo gị. Anyị na-ekwu na ọ ga-ewe ụbọchị 20-30 iji mezue ndị debanyere aha 1000.
Ndị debanyere aha ha ga-arapara na ọwa m maka ndụ?
N'ezie n'ihi na ha sitere na mmadụ n'ezie! Agbanyeghị, ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na mmadụ debanye aha gị n'ahịrị n'ihi ịdị mma vidiyo gị, anyị enweghị ike mejupụta maka nke ahụ.
Note: YouTube anaghị ewepụ ndị debanyere aha n'ezie. Ọzọkwa, lee usoro mgbasa ozi nke YouTube kwadoro. Ya mere ị nwere ike ijide n'aka.